Ukungaguquki kungayiphazamisa i-Pirates | Scrolla Izindaba
Ukungaguquki kungayiphazamisa i-Pirates
Ukungaguquki kungahle kulahlekisele i-Orlando Pirates ngesicoco seligi se-DStv Premiership.
Abalandeli be-Pirates banganikela nganoma yini ukubona iqembu labo liphakamisa iligi ngemuva kweminyaka eyisishiyagalombili. Kodwa ukungahambisani kube yinkinga enkulu ye-Pirates eminyakeni edlule.
Ukubabuka enkundleni kuhlala kuyintokozo , kepha lapho impempe yokugcina ikhala bebevame ukungabi nalutho abalukhombisayo.
Kule sizini badlala ibhola elihle beholwa nguJosef Zinnbauer noFadlu Davids kodwa imiphumela ikhombisa ukuthi sebesele ngamaphuzu amane kubaholi be-log i-Mamelodi Sundowns.
Kusasa ntambama badlala ne-Cape Town City enenkani enkundleni yezemidlalo i-Danie Craven ngo-3.30 ntambama e-Mother City.
“Kumele siqale ukubuyisa ifomu yeligi yethu emgqeni,” kusho uDavids.
“Asicabangi nganoma yini enye kodwa amaphuzu aphezulu.”
I-Citizens ayiduduleki futhi uDavids uyakwazi lokho.
“Uma siya eKapa kuhlale kunzima ikakhulukazi uma sibhekene ne-Cape Town City. Bahleleke kahle futhi bahlasela noma yini,” kusho uDavids.
Ngempelasonto edlule i-Pirates ibibhekene nokuhlulwa kwayo kokuqala kwesizini kwaze kwaba yilapho uTshegofatsho Mabasa ezoyitakula ngokukhahlela kokugcina komdlalo.
Lokho kudlala ekhaya kubonakale kwehla endaweni yesithathu namaphuzu amabili ngemuva komakhelwane babo base-Soweto i-Swallows FC ngemuva kwemidlalo emihlanu. Ngakolunye uhlangothi i-City isendaweni yesithupha ngephuzu elilodwa ngemuva kwe-Pirates.
Eminye imidlalo ye-DStv Premiership
NgoMgqibelo: Golden Arrows izodlala ne-Swallows (e-Sugar Ray Xulu Stadium, ngo-3.30pm); Tshakuma Tsha Madzivhandila izodlala naMaZulu (e-Thohoyandou Stadium, ngo-6pm), Maritzburg United izodlala ne-Mamelodi Sundowns (e-Harry Gwala Stadium, ngo-8.15pm)
NgeSonto: TS Galaxy izodlala ne-Stellenbosch (e-Mbombela Stadium, ngo-3.30pm); I-Baroka izodlala ne-Chippa United (e-Peter Mokaba Stadium, ngo-3.30pm).